Mandraki-peo: Ny toetoetry ny fahalalaham-panaovan-gazety · Global Voices teny Malagasy
Mpanao gazety/mpikaroka avy amin'ny firenena dimy miresaka momba ny fahalalaham-panaovan-gazety
Voadika ny 14 Mey 2022 9:16 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, English
Sary nampindramin'i Ameya Nagarajan
Tamin'ity herinandro ity izahay nanao zavatra hafa. Ao anatin'ny tatitra manokana momba ny fahalalaham-panaovan-gazety, niantsafa tamin'olona miisa dimy izahay niresaka momba ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety any amin'ny firenena misy azy tsirairay avy ahafahana mitaratra hoe inona ireo fanamby atrehin'ny fampahalalam-baovao any amin'ny lafy valon'izao tontolo izao any. Niresaka tamin'i Fernanda Jaramillo, mpanao gazety mahaleo teny avy any Colombia, Raksha Kumar, mpanao gazety sady mpikaroka avy ao India, Wijayanto, mpikaroka momba ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety avy ao Indonesia, Vivian Wu, mpanao gazety menavazana shinoa, ary Jovana Presic, mpanao gazety manana fikambanana mpanamarin-java-misy avy ao Serbia, izahay tamin'izany.
Mitondra anao ireo vaovao isam-paritra manerana izao tontolo izao ny Global Voices Podcast. Isan-kerinandro ireo olona avy ato amin'ny vondrom-piarahamoninay ato mizara ireo vaovao manana ny lanjany any amin'ny fokonolona misy azy sy ny fomba hananganany ireny tantaran-dry zareo ireny rehefa mivoaka ny tokotanin-tsehatra nisiany. Mihainoa ankehitriny ny fatram-baovao manerantany avy amin'ny feo isam-paritra raisinao isan-kerinandro.
Raha nankasitrahanao ity fizarana ity, miangavy manaova famandrihana ary lazao amin'ny namanao ny momba anay! Afa-manjohy anay ao amin'ny Twitter ianao. Ny hira avy amin'ity raki-pao ity dia avy amin'ny “Voyage” nataon'i NikMartken, avy amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ankapobeny.